Shuruudaha Xawaaladda iyo Shuruudaha Ganacsiga | Ganacsi lacageedka fudud ee FXCC
Home / shuruudaha iyo xaaladaha
Shuruudaha iyo Shuruudaha FXCC
FADLAN WAXYAABAHA KU SAABSAN SHARCIYADA IYO SHARCIYADA.
Adiga oo ku soo dhaweynaya WEBSITE WAXA LAGA HELI KARTAA SHARCIYADA IYO SHARCIYADA HALKAN KA HELI KARTAA SI AAD LAHAYN IYO WAX KA BADAN. FXCC waxay xaq u leedahay in ay bedesho shuruudahaas iyo shuruudaha ay ku qoran tahay waqti kasta oo aan kuugu soo sheegno. WAXAAD WAXBARASHO KA HELI KARTAA WAXYAABAHA LAGU QIYAALAYNAYO FARSAMADA IYO SHURUUDAHA. ISKU DIIDO ISTICMAALKA SI LAGU QAATO WADDANA LAGU QAADO WAXYAABAHA KALA DUWAN YAHAY WAXYAABAHA KALA DUWAN TAHAY IN LAGU QAADO. HADDII AAD U QAADINAYAAN SHARCIYADA IYO SHARCIYADEED, FADLAN WAXAA KA HELAY WEBSITE.
FXCC waxay leedahay oo haysaa goobtan. Wax ficil ah oo lagu soo dejin ama nuqul ka sameysan kumbuyuutarkan ayaa ku wareejin doona cinwaanka software ama qalab ka socda meeshan. Wax kasta oo aad u gudbinayso boggani wuxuu noqonayaa hantida FXCC, waxaa loo isticmaali karaa FXCC wixii ujeedo sharci ah, waxaana lagu sii daayaa shaaca ka qaadashada sida ku habboon FXCC, oo ay ku jirto hay'ad kasta oo sharci ama sharci ah taas oo FXCC ay tahay mawduuc. FXCC waxay xaq u leedahay dhammaan xuquuqda marka la eego xuquuqda daabacaadda iyo lahaanshaha alaabooyinka dhamaan qeybaha ku yaal meeshan, waxayna xoojin doonaan xuquuqdaas sida sharciga oo dhan.
Waxyaabaha ku jira barta internetka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn dhammaan qaabaynta, qoraalka, fiidiyeyaasha, cajaladaha maqalka, iyo sawirada, ayaa leh, marka laga reebo haddii kale si cad loo sheegay, FXCC. Marka laga reebo haddii si kale loo sheego halkan, waxaa laga yaabaa in aan lagu daabicin, lagu gudbin, lagu muujiyo, la sameeyo, loo qaybiyo (magdhow ama haddii kale), shatiga la beddelo, la beddelay, looxiray isticmaalka dambe, ama si kale loo isticmaalo ama gabi ahaanba Ogolaansho qoraal ah oo FXCC ah.
Goobtan iyo macluumaadka, qalabyada iyo walxaha ku jira waxa loola jeedaa, ama loogu talagalay in loo qeybiyo ama loo isticmaalo, qof kasta ama qof shaqsi ah muwaadin ah ama deggan degaan ama ku yaal meel kasta oo ay xukumaan, sida daabacaadda, daabacaadda, helitaanka ama helitaanka Isticmaalka wuxuu noqonayaa mid lid ku ah sharciga ama qawaaniinta ama ay ku xiran tahay FXCC ama hay'adaha ay ku leedahay shuruudaha diiwaangelinta ama shatiyada ee ku yaala xukunkan.
WAXYAABAHA LAGA HELI KARO SHARCIYADA IYO MAXKAMADDA
Macluumaadka ku yaal boggan waxaa la bixiyaa "Sida ay tahay". FXCC ma dalbanayso saxnaanta qalabka lagu bixiyey halkan, si cad ama macquul ah, ujeedo gaar ah oo si cad u diideysa wixii damaanad ah ee ganacsiga ama jiritaanka ujeeddo gaar ah. FXCC mas'uul kama noqoneyso wixii lumay ama waxyeelo keeni karta in ay dhexgalaan dhinacyada saddexaad ee macluumaad kasta oo laga helo adiga oo adeegsanaya boggan. Inkasta oo macluumaadka aad ku siisay boggan la helay ama laga soo ururiyey ilaha aan aaminsanahay in lagu kalsoonaan karo, FXCC ma xaqiijin karto saxnaanta, ansaxnimada, daahfurnaanta ama dhamaystirka macluumaadka ama xogta laguu heli karo wax kasta oo gaar ah. Ma jiro FXCC, ama mid ka mid ah hay'adaheeda, agaasimayaasha, saraakiisha ama shaqaalaha, ama bixiyaha cid kasta oo sadexaad ah ayaa masuul ka ah ama masuuliyad ka saaran nooc kasta oo ah khasaaro ama waxyeelo oo aad ku dhacdo haddii ay dhacdo wixii fashilmay ama gaabis ah ee goobtan, ama ka dhalanaysa ficil ama ka-reebitaan cid kale oo ku lug leh sameynta boggan ama xogta ku jirta oo ay kuugu jirto, ama wixii kale ee kale ee la xidhiidha helitaankaaga, awood la'aanta inaad galaan, ama isticmaalka goobta ama qalabkaan, haddii ama ma ahan duruufaha keenaya sababahan oo kale waxaa laga yaabaa in ay gacanta ku hayaan FXCC ama mid kasta oo bixiya bixinta taageerada software ama adeegga.
Xaalad kasta ha lahaadee, FXCC waxay masuul ka tahay wixii sababo, khaas ah, khaas ah, ciqaab ama waxyeelo tusaale ah oo ka imaanaya isticmaalka ama awood la'aanta isticmaalka meeshan ama qayb kasta, iyadoon loo eegin haddii FXCC la tixgeliyey suurtagalnimada dhaawacyada noocan ah iyo iyada oo aan loo eegin qaabka ficilka, ha ahaato Heshiiska, Tort (oo ay ku jirto dayacaad), Mas'uuliyad adag, ama haddii kale.
Macluumaadka ku jira boggan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka macluumaadka kaliya. Sidaa daraadeed waa in aan loo tixgelin sida dalab ama u-qadarin qof kasta oo ka mid ah awood kasta oo ku haboon oo aan dalab u ahayn ama aan loo ogolaan ama qof kasta oo uu u yahay mid sharci darro ah inuu ku sameeyo dalab ama dalab, ama loo tixgeliyo sidii lagu talin lahaa iibsan, iibin ama si kale ula macaamilaan maalgelin gaar ah. Waxaa si adag lagula talinayaa inaad hesho maalgelin madax-bannaan, maaliyadeed, sharci iyo canshuur ka hor intaadan bilaabin maalgelin kasta. Waxba kuma jiraan boggan waa in la akhriyaa ama la iftiimiyaa sidii talobixinta maalgashiga ee qeyb ka mid ah FXCC, ama mid ka mid ah kuwa ay wada leeyihiin, agaasimayaasha, saraakiisha ama shaqaalaha.
Dabeecadda maalgashiga Qalabka Maaliyadeed waa sida oo kale dhammaan qalabka maaliyadeed ee ku habboon qof walba mooyaane:
waxay aqoon u leeyihiin arrimaha maalgashiga,
ayaa awood u leh in ay qaadaan halista dhaqaale ee maalgashiga,
fahamsan halista ku lug leh; iyo
waxay aaminsan yihiin in maalgashigu ku haboon yahay ujeeddooyinka maalgashi gaar ah iyo baahiyaha dhaqaale.
Haddii qof kasta oo xirfadle ah oo xirfadle ah uu ku maalgeliyo Qalabka Maaliyadda, waxaa lagula talinayaa in kaliya qayb ka mid ah miisaaniyadda maalgashadayaasha maalgashatada maalgalinta muddada dheer waa in la maalgashado.
Waxa kale oo lagugula talinayaa in dhammaan maal-galiyayaashu ay raadsadaan talooyin ka socda lataliye maal-galiyeyaal xirfadlayaal ah ka hor inta aan la samayn maal-galin ku jira qalabka Maaliyadda.
LINKS TO SITES KALE
Xidhiidhka aan ka helayno shabakadaha aan ahayn FXCC waxaa lagu bixiyaa oo keliya tusayaal tilmaamaya mawduucyada laga yaabo inay faa'iido u leeyihiin isticmaalayaasha shabakadaha FXCC, FXCC ma laha kantaroolka waxyaabaha ku jira boggaan aan ahayn FXCC. Haddii aad dooratid inaad isku xirto Website aan aheyn mid ay maamusho FXCC, FXCC ma bixiso wax damaanad ah, si cad ama qeexan, oo ku saabsan mawduuca boggaan, oo ay ku jirto saxnaanta, dhammeystirka, kalsoonaanta, ama ku haboonaanta ujeeddo gaar ah, mana ogola shuruudaha FXCC in goobta ama content ay ka madax banaan tahay wixii sheegasho ah ee copyright, calaamad, ama jebinta kale ee xuquuqda dhinac saddexaad ama in goobta ama content ay ka fog tahay fayraska ama wasakh kale. FXCC ma damaanad qaado xaqiiqda ah dukumentiyada internetka. Xidhiidhada aan ka heleynin goobaha aan ahayn FXCC micnaheedu maaha mid ka mid ah ansixinta ama masuuliyadda fikradaha, fikradaha, badeecada, macluumaadka, ama adeegyada lagu bixiyo goobahaas, ama matalaad kasta oo ku saabsan mawduucyada goobahan oo kale.
Haddii aad la xiriirto FXCC adigoo e-mail kula xiriiraya, waa inaad ogaataa in ammaanka internetka aan la hubin. Adoo diraya fariimo email ah oo xasaasi ah ama qarsoodi ah oo aan la qarsoomin waxaad aqbashaa khatarta ka iman karta caynkaas oo kale iyo sir hayn la'aanta sirta internetka. Internetku ma aha 100% ammaan ah waxaana laga yaabaa inuu qofku awoodo inuu dhexgalo oo akhriyo faahfaahintaada.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aad na siiso waxaa loola dhaqmi doonaa qarsoodi waxaana lagula wadaagayaa oo keliya qeybta Shirkadda, shirkadaha iyo la-hawlgalayaasha ganacsatada loomana sheegi doono dhinac saddexaad marka laga reebo xaalad kasta oo qaanuuneed ama sharci ah. Nidaamyada raadraaca website-yada waxay sidoo kale ururin karaan xog ku saabsan faahfaahinta boggaga aad ka heshay, sida aad u ogaatay boggan, inta jeer ee booqashooyinka iyo wixii la mid ah. Macluumaadka aan helno waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo waxyaabaha ku jira boggayaga internetka waxaana laga yaabaa inaan u isticmaalno annaga oo aan kula soo xiriirno, hab kasta oo ku habboon, iyo inaan ku siino macluumaad kasta oo aanu aaminsan nahay in ay faa'iido kuu tahay.